पाकिस्तानसँग एक्कासी किन जङ्गियो उत्तर कोरिया? – Eps Sathi
March 12, 2022 366
काठमाडौं। पाकिस्तान र उत्तर कोरिया बीच वि’वाद भए को रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यो हप्ता को सुरुवातमा पाकिस्तान को पुलिस ले इस्लामाबादस्थित उत्तर कोरिया’को दूतावासमा भारी मात्रामा म’दिरा भएको सूचना पाएपछि छापा मा’रेको थियो। यो घट’ना लाई लिएर उत्तर कोरिया’ले कडा आपत्ति जनाए को छ। उत्तर कोरियाको दूतावासले यो घ’टना भियना सन्धिको घोर उल्लंघन भएको बताएको छ।
छापा मार्ने क्रममा दूतावास लाई क्षति समेत पुगेको बताइए को छ। पाकिस्तानी अखबार डनको एक रिपोर्ट’का अनुसार घ’टना को जानका’री दिँदै उत्तर कोरियाको दूतावास ले इस्लामाबाद’का पुलिस महानिरीक्षण (आइजीपी) लाई एक पत्र लेखेको छ। पत्रमा इस्लामाबाद को एफ–१० पुलिस स्टेशन बाट एक महिला पुलिस कर्मीसहित ७ जना पुलिसकर्मी सोमबार ७ मार्चमा दूतावासमा आएको र गैरकानुनी रुपमा दूतावासमा प्रवेश गरेको बताइए को छ।
पत्रमा अगाडि लेखिए को छ दूतावासका स्टाफले उनीहरु लाई याद दिलाए कि दूतावास को परिसर उत्तर कोरिया दूतावास को सम्प्रभु क्षेत्र हो। स्टाफ ले पुलिस लाई आफ्नो छापा मा’री रोक्न भने। तर पुलिस ले स्टाफ को कुरा लाई बेवा’स्ता गरे। पुलिसले केही सामान जफत गर्ने बहाना’मा पछाडि’को स्टोर रुमको तलाशी लिए र दूतावासका कर्मचारी लाई ब’न्दुक देखाएर डर ध’म्की दिए।’
पत्रमा पुलिस कर्मीले ढोका फुटाइदिए को र बेसमेन्ट को एक कोठामा तोडफोड गरेको भन्दै दूतावास’ले यो छापामारीमा कुनै बाहिरी शक्ति’को हात भएको आरोप लगाए को छ।’ उत्तर कोरियाले यो घ’टना प्रति खेद व्यक्त गर्दै यो घ’टना मा संलग्नहरु माथि जाँच र कार’वाही गर्न र यस्ता घटना फेरि हुन नदिन विदेश मन्त्रालय र सुरक्षा संगठन सँग माग गरे’को छ ।
पुलिसले दूतावा’समा भारी मात्रामा मदिरा भएको सूचना पाए पछि छापा मारेको बताएको छ। सूत्रका अनुसार इस्लामाबाद’का आइजीपी’ले उक बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाई जाँच गरेर ३ दिन भित्र रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। यो समाचार डिसी नेपालमा प्रकाशित रहेको छ।
Prevब्रेकिङ न्यूज, अब कोरिया प्रवेश गर्दा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने, अरु केके भए निर्णय
Nextखुल्यो कोरियन भाषा परीक्षा, हेरौं कहिलेबाट फाराम भर्ने?
रेखा थापासँग बिबाह गरेका बलराम शाही को हुन?
एनसिसी बैंक नबिलसँग मिसिने तयारी, इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयन पनि नजिकिँदै
कोरियाबाट अमेरिका पुगेका हावाङ्ग जसले सेयरबजारबाट २ दिनमै गुमाए २४ खर्ब